မြူကို ကိုယ့်အတွက် ဖမ်းပေးခဲ့သူ
နံနက်ခင်းကတော့ လုံလောက်အောင် မိုးလင်းပေးခဲ့ပါတယ် မြူ..။
ကိုယ် မျက်ရည်ဝိုင်းမိတယ် မြူ…။
လမ်းကလေးက ကိုယ့်ဘေးမှာ တရိပ်ရိပ်ကျော်ဖြတ်
ကိုယ်တို့ကို သူတို့ကျော်ဖြတ်ကုန်ကြပြီ မြူရဲ့
ကျေးဇူး.. ကျေးဇူးအထူးပါ မြူ..။
ကိုယ်…. ထားရစ်ခဲ့ရတယ် မြူ…။
Posted by pandora at 9:21 PM
ဘယ်ရမလဲ ကဗျာနဲ့လာတို့ပြီးခေါ်သွားတာ :) မြူ ကို ဖတ်ရှုခံစားသွားကြောင်းပါ မကြီးပန်ရေ ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ :)
အမကြီး မပန် မြူကို နှစ်ခြိုက်စွာခံစားသွားပါတယ်
ပျော်ရွှင်ပါစေ ခင်ဗျာ .. :)
ကဗျာလေး ဖတ်ရတာကိုက မြူတွေထဲမှာဖတ်ရသလိုလို ကဗျာလေးလှတယ်။
မပန်.. ကဗျာလေး လှသလို ဓာတ်ပုံလေးလည်း လှတယ်.. ဘယ်တူရိုက်တာလဲ.. မပန်လား?.. :)
နှစ်သစ်ကို မြူကဗျာနဲ့ ဖွင့်လိုက်တာပေါ့ ..
အိပ်မက်ထဲမှာ မြူကို လိုက်ဖမ်းကြည့်နေတာလား..
အိပ်ရာက နိုးတော့ မြူတွေက အိပ်မက်ထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့..
အနုပညာ အားကောင်းတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပါပဲ ပန်ပန်..။
စင်္ကာပူရောက်ကတည်းက မြူကို မတွေ့ရတော့ဘူး မြူ.. ကျန်းမာရဲ့လား မြူ.. နှစ်သစ်မျာ ပျော်ရွှင်ပါစေ မြူ..
(အဟဲ.. ကဗျာဖတ်ရင်း နည်းနည်းဈာန်ဝင်သွားလို့
ပျော်ရွှင်ပါစေ ညိမ်းညို တင့်ထူးရွှေ ကောင်းကင်ကို
မနုစံရေ ပန်ဒိုရီက လမ်းခရီးတခုမှာ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းရိုက်ပေးထားတာပါ
ညီညီရေ နှစ်သစ်မှာ ဘ၀အသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ
မျက်နှာနှစ်ဖက်ကို တပြိုင်နက် ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ စပိတ်တစ် ဖဲတစ်ချပ်
မောဂ္ဂလိ နှင့် မျောက်ငတိများ ကို ဖတ်ရှုခံစားခြင်း